Resevera sy mpamily taksibe Tsy maintsy mody aloha, mba hisorohana ny tsy fandriampahalemana
Mamy ny mody, mihoatra noho izany anefa ny fitadiavam-bola, nefa ny aina tsy hananam-piry, hoy ny mpamily mpanampy taksibe 157 nanaovana ny fanadihadiana. Nambarany, fa rehefa tonga ny amin’ny 7 ora hariva dia tsy maintsy mody izy ireo,
satria ny mpamily taksibe-ny mody lavitra any Sabotsy Namehana, raha etsy Andranobevava kosa no mody izy (resevera).Mikasika ny “versement” izay enjehina dia nolazainy, fa efa vita fifampiresahana tamin’ny mpampiasa ny mikasika izany. Izay vola azo eo no entina mody na mahavita “tour” dimy aza ao anatin’ny iray andro. Antony roa no mahatonga azy roalahy ireo mody aloha. Voalohany, mba ialana amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny fanendahana ary ny fandrobana. Tsy mitsitsy mantsy ireo olon-dratsy rehefa manao ny asa ratsiny ary manaraka hatramin’ny aina, raha tratra alina sy tsy mitandrina. Ho an’ingahy mpamily kosa dia tsy maintsy mody aloha izy, noho izy lavitra fodiana, satria raha mialà eo amin’ny “arret”
eny Sabotsy Namehana izy dia mbola mandeha dia an-tongotra an-tsasakadiny ary miditra elakelan-trano vao tonga any an-tranony. Ho an’ny reseveran’ny zotra F kosa indray, dia voalazany, fa misy ny
bokin’andraikitra na “cahier de charge” ary voalaza ao fa amin’ny 8 ora alina no fetra itaterana farany. Nefa raha mbola misy ny olona tokony aterina dia manohy ny asany izy ireo, fa tsy mijery fotsiny ireny mpajifa ireny. Ilaina ny fifampitsinjovana, nefa tokony tsy hanome tsiny be fahantany ny
mpitatitra ny mpanjifa raha misy ny fodian’izy ireo aloha, hoy izy. Raha io bokin’andraikitra io mantsy no arahin’ny fiara mpitatitra rehetra, dia ahoana ny momba an’ireo mpamily na/sy resevera mody lavitra…?. Ilaina ny fifanampiana sy ny fiaraha-mientana ary ny fanohanana azy ireo, hoy ny fanazavan’ilay mpanampy mpamily.